Moa ve ho tafaray ny polisy sy zandary mpifandrafy any ambadika any? | Hevitra MPANOHARIANA |
Moa ve ho tafaray ny polisy sy zandary mpifandrafy any ambadika any?
2008-10-16 @ 20:31 in Politika
Baikon'ny filoha faratampon'ny foloalindahy ny hanambàrana ny polisy sy ny zandary ho deparitemanta iray. Ny antony araka ny filaza dia mba hahombiazana kokoa eo amin'ny asa fitandroana ny fandriampahalemana anatiny eto amin'ny firenena sy hamerenana ny hasin'ny mpitana fitaovam-piadiana ary ny hisian'ny fifampifehezana matotra kokoa.
Mpifanerasera amin'ireo vondron'asa mpitazona fitaovam-piadiana roa ireo ny tena. Mpitam-piadiana ny roa tonta ka manana ny heriny avy. Azo ambara aza fa samy miaro ny vondrona misy azy avy ny tsirairay ary mifanindry mihitsy aza, tafiditra koa eto ny miaramila. Politika napetraky ny mpitondra teo aloha nampanjaka ny zarazarao hanjakana ny nijoroan'izy ireo ho samy manana ny azy. Fiarovana ny sezany mahomby tokoa izany. Raha toa manko mitady hanongam-panjakana ny ao amin'ny polisy sanatrian'izany dia tsy maintsy hanao izay hanakanana izany ny ao amin'ny zandarimaria na ny mifamadika amin'izany. Izay no nahatonga ny hadihady hoe raha tafaray eo ny fanapahana sy ny fifehezana mety ho mora kokoa ny fanonganam-panjakana satria tsy misy hery mifandrafy loatra intsony.
Nahoana ary no najoro ny baraingo amin'izay ho fahombiazan'ny fampitambarana ny polisy sy ny zandary? Ohatra vitsivitsy: Any amin'ny polisy, araka ny tatitry ny zandary sasany, vao any ampiofanana dia efa masahina ao an-dohan'ireo mpianatra ho polisy ireo amin'ny taranja tantara fa ny zandary no namono ny polisy tamin'ny rotaka 1972 (fony FRS na Forces Republicaines de sécurité) sy tamin'ny 1975 (fony Groupe Mobile de Police na GMP) tamin'ny fiokona nataon'izy ireo tetsy Antanimora ka niampangana azy ireo ho namono ny filoham-panjakana. Avy amin'ny zandarimaria indrindra anefa tamin'io fotoana io ny filoha nitondra ny firenena. Noho izany efa nomanina ho hery mpifanandrina amin'ny zandary sahady ny polisy. Etsy ankilan'izay dia mirehareha amin'ny fiofanana vitany kosa ny zandary fa ny asan'ny polisy rehetra dia vitany raha ampanaovina azy fa ny polisy kosa ho be ny asa tsy ho vitany raha ampanaovina ny asan'ny zandary ireny. Ny vola fandrain'ny roa tonta anefa toa mifamadika amin'izany. Ny lasitra famolavolana ny roa tonta izany dia tsy mitovy velively. Sarotra ny hahombiazan'ny fampitambarana raha tsy ny toby fiofanana mihitsy aloha no raisina.
Ankoatra izay, mety tsy ho eken'ny eritreritry ny polisy velively ny ho baikon'ny zandary ary mihivingivin-doha tanteraka ny zandary ka hoe eo ambany fifehezana manamboninahitra polisy. Mifampihevitra ny ho sakamalaho sy havozo manko ka samy manana ny hanitra ho azy. Be ny mihevitra fa noho ny baikon'ny filoha dia manaiky ambava ny manamboninahitra avy amin'ny roa tonta fa any anaty any kosa mety ho efa mivonto ny fo.
Manaraka izany indray ny fipetraky ny rafitra an-tanan-tohatra. Ny avy amin'ny polisy dia mahita avy hatrany fa ny Praiminisitra no eo amin'ny faratampon'ny rafitra vaovao. Amin'izao fotoana izao anefa dia manamboninahitra jeneraly avy amin'ny zandary no mitazona izany toeran'ny praiminisitra izany. Singa eo amin-dry zareo izay hilazana fa tadiavin'ny zandarimaria atelina tanteraka ny polisy. Etsy ankilany indray anefa toa vitsy ihany miohatra amin'ny zandary ny polisy manana laharam-boninahitra ambony ka tsy misy isafidianana loatra hitana andraikitra ambony, hany ka na sanatria aza mety hisy ny tsy fahombiazana eo amin'iny olona iny dia tsy misy ihany na dia izany aza ny mahasolo azy.
Tohin-dresaka ihany dia maminavina aho ny amin'ny antony mahatonga izao fanapahan-kevitry ny filoha izao. Heveriko fa noho ny nataon-dRazafindrazaka Emmanuel fantatra amin'ny mampalaza azy hoe Bôlô izay manamboninahitra ambony ao amin'ny polisy no nandraisana ny fanapahan-kevitra hitelemana ny polisy ho zandary izao. Kely ihany ny herijikan'io vinavina io na dia izany aza. Be ny mihevitra fa ny deparitemanta ihany no ho iray fa samy hiolonolona amin'ny misy azy avy ny roa tonta. Tsorina fa fanahiana goavana amin'ny mety ho fipoahan-javatra tsy ampoizina no ho vokatry ny fanapahan-kevitry ny Filoha izao raha tsy mitandrina izy. Arakaraky ny seza very ao amin'ny manamboninahitra avy amin'ny roa tonta manko nomety hisian'ny fifanandrinana. Fa enga anie ny hamisavisana ny ratsy hiavian'ny soa na dia izany aza.
Farany, tsaroako tsara fahakely fa tena tiako mihitsy ny hanao izany asana zandary izany. Asa inona loatra angaha no nahatonga izany? Soa ihany fa sady keliray ny tena no kely endaka fa teo amin'ny fahaizana mitifitra ihany no tsy azo novazivaziana (tsy niraty tifitra aho fony izaho SN teny Langaina vao sambany nanao izany).